SO.MA.H.G.E.E.D MADAGASCAR : Nanokana andro hiseraserana
Ny 13 sy 14 septambra teo no natokan’ny societe malgache d’hepato-Gastro Enterologie et d’endoscopie Digestive SO.MA.H.G.E.E.D hiseraserana amin’ny mpianatra sy mpampianatra. 17 septembre 2019
Ny tanjona dia ny hanatsarana ny fanomanana ny fampianarana mba ho voafehy tanteraka, hampiakarana ny fari-pahaizan’ny mpianatra isaky ny seha-pianarana koa mba tsy hisian’ny famerenan-taona. Hijerena ihany koa ny olana amin’ny sehatra rehetra araka ny voka-pikarohana ataon’ny mpianatra amin’ny sampam-pampianarana maro (médicale, tourisme, Droit, gestion, hospitalière…) ahafahana manolotra vinam-pikarohana sy lalana ara-pahasalamana eto Madagasikara.
Tao ihany koa ny fanentanana sy fampahafantarana ny daholobe mikasika ny aretina sy ny fisorohana azy ireo amin’ny alalan’ny hira sy poezia. Ary indrindra fianarana ny fenitra tokony harahina amin’ny ‘hygiène de vie’ mba hialana amin’ireo aretina avy amin’ny tontolo iainana. Anisany nampahafantarina nandritra ity fotoana ity ny vokatra toaka na alikaola artisanal, ny olana mety entina eo amin’ny fahasalamana. Tao ihany koa ny valorisation du raphia farinifera voankazo anala mba hampiasana azy amin’ny sakafo. Tao ihany koa ny ‘stess oxydatif’ sy ny ‘pathologies humaines, ny olana amin’ny fandraisana an-tanana ny lithiase biliaire amin’ny marary voan’ny cirrhose post-NASH na Non Alcohol SteatoHepatitis.
Ny tolakandron’ny zoma kosa dia ny ascite sy ny infection du liquide de l’ascite, na ireny rano amin’ny kibo ireny no nampahafantarina ireo nanatrika. Narahin’ny tumeurs belignes du colon et du rectum, ny gastritis aigues et chroniques….. Ny sabotsy kosa dia niresahana ny aretina toy ny hémorroïdes, ny colopathie fonctionnelle, ny pancréatites chroniques…tao ihany koa ny impact du syndrome métabolique sur les organes ary ny fitsaboana ny gastrites, ny ulcères gastroduodénal hémorragique, ny hépatites virales chroniques B sy C ary ny ifandraisan’ny stress oxydatif sy ny aretina hépato cardio vasculaire.
Maro ireo aretina sy fomba fitsaboana noresahina nandritra ny roa andro, ary ankoatra ny aretina sy fitsaboana dia nisy ihany koa ny hira sy poezia izay naompana indrindra amin’ny hevi-dehibe ihany koa. Tao amin’ny bâtiment Kakal Mahajanga be no nanaovana ity hetsika ity ary nitarika izany ny profesora Eugène Morel izay lehiben’ny hépato gastro ao amin’ny hopitaly manara-penitra Mahavoky atsimo.